महिलाले याैन इच्छा तिब्र भएको बेला पुरूस सँग यस्तो व्यबहार गर्छन् ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
महिलाले याैन इच्छा तिब्र भएको बेला पुरूस सँग यस्तो व्यबहार गर्छन् !
महिला अनपेक्षितरुपमा तपाइँको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन् वा तपाइँलाई छुने बाहाना खोजिन् भने बुझ्नुस् उनलाई यौन चाहाना जागेको छ । महिलाहरु खुट्टाको बुढी औंलाले भूइँमा कोतर्न थाले भने पनि उनीहरुको चाहाना बुझ्नु पर्छ । कतिपय स्त्रीहरु च्याटमा त्यस्तै खालका साइन पठाउने वा फोहोर कुरा गर्ने गर्छन् ।
यदि स्त्रीले तपाइँको नजिक भएर लामो लामो लामो र गहिरो स्वास लिइरहेको अनुभव गर्नु भो भने उनलाई उत्तेजना भैरहेको छ भन्ने बुझ्नुस् । महिलाहरु उत्तेजित भएपछि गहिरो र लामो श्वास फेर्छन् । महिलाहरु उत्तेजित भएपछि उनीहरुको मुटुको ढुकढुकी पनि बढ्छ । कतिपय महिलाले नजानिदोगरी पुरुषको संवेदनशील भागहरुमा छुने समेत गर्छन् ।
यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले तपाइँलाई अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् भने बुझ्नुस् उनलाई तपाइँसँग संसर्ग गर्न मन छ । अझ स्त्रीले तपाइँको ओच्छ्यानमा बसेर ‘कस्तो नरम ओच्छ्यान’ वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भन्ने कुरा बुझ्नुस् उनी के चाहन्छिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस नियमित सेक्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? जान्नुहोस् यो रोचक कारण
२३,बैशाख.२०७६,सोमबार १३:१३ मा प्रकाशित
← फिल्म निर्मातालाई मायाको भोक मेट्न ल्याएकी कान्छी पत्नीले नै हालिन् जेल
भारतीयलाई नेपाली नागरिकता प्रकरणण: पक्राउ गर्न प्रहरीको आलटाल →